Lentel LCD TV ကဘာလဲ ??? 45minute သည်ထင်ရှားသောအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအလွန်ကောင်းသည်။
Lentel LCD TV ကဘာလဲ ??? 45minute သည်ရာထူးတိုးတံဆိပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မတ်တပ်ရပ်သည်။ သို့သော်ပြသရန်အလွန်ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤ ဦး တည်ချက်အတွက်အချိန်အတော်ကြာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး၊ ဤအမှတ်တံဆိပ်ကိုဤတိုင်းပြည်များတွင်မတွေ့ရပါ။ ငါမင်းကိုအာမခံတယ် ...
LG အဝတ်လျှော်စက်တွင်စည်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆောင်ချက်ကိုမည်သို့ဖွင့်ရမည်နည်း။ ဒီညွှန်ကြားချက်မှာဘာမှမရှိဘူးလား။ စက်တွင်ဤလုပ်ဆောင်မှုမရှိပါက၎င်းကိုမဖွင့်ပါ။ "စည်သန့်ရှင်းရေးစနစ်ကိုရည်ရွယ်ပါသည်။
တီဗီ seklokeramicheskih ပြားအဖြစ်သားသမီးများ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကို lock နှင့်ဒေတာများစာရွက် #10064 အတွက်ဝယ်လိုအား၏ထိုကဲ့သို့သော function ကိုသည်ရှိ၏, သတ်မှတ်မည်။ #10064; password ကို SMART # 10064; #10064; #10174; #10064; Settings များ # 10064; #10137; #10064; LOCK # 10064; #10137; #10064; သတ်မှတ်မည်။ #10064; Password ကိုသတ်မှတ်ပေးသည်ဒါမှမဟုတ် password ကိုတီဗီ #9998 ပြောင်းလဲ; က default password ကို #12300; 0000 # 12301 ;. ...
သူတို့ကလေအေးစက်ကိုးအကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါသောသူအပေါင်းတို့သည်ကျော်ကြားအမှတ်တံဆိပ်စကေးလျှို့ဝှက်စွမ်းရည်အရွယ်အစားလိုက်နာခုနစ်ပါးသောလေအေးပေးစက်ကိုဆိုလိုသည်။ အများစုမှာအုပ်စုခွဲ system ကိုမော်ဒယ်များအဆိုပါကီလိုနှင့်အတူတိုက်ဆိုင်ပါဘူးသောတန်ခိုးအညွှန်းကိန်း၏နာမကိုမဆံ့ ...
Zanussi ရေပူစက်ကားအဘယ်သူနည်း၊ သင်မည်သို့ထပ်မံအကြံပြုသနည်း။ လွန်ခဲ့သောနှစ်များက3၀ ယ်ယူခဲ့သမျှသည်ရောင်းရန်မဟုတ်တော့ပါ။ ဒါကြောင့်ထုတ်လုပ်သူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ "ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း" ထက်ရှေ့ကိုရောက်နေတယ်။ ဒါကြောင့်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုယူသွားပါ။
ငါစမတ်တီဗီလိုသလား။ အဘယ်သူသည်စမတ်တီဗီရှိသနည်း 30 ဒေါ်လာတန်ဖိုးရှိသည့်မီဒီယာဖွင့်စက်ငယ်လေးတစ်ခုကသင်သည်မည်သည့်တီဗီကိုမဆိုစမတ်တီဗီ၏လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးနှင့်အခြားအရာများစွာနှင့်အပြည့်အဝတပ်ဆင်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ နှစ် ...
သငျသညျကိုဘယ်လိုသိသလဲ ??? အဝတ်လျှော်စက်တွေ Air-ပူဖောင်း-type အမျိုးအစား? သူတို့ဘယ်လိုပုံမှန်အတိုင်းကှာခွားပါဘူး ??? ဖြစ်ကောင်းပူဖောင်းပေါက်ကွဲပြီး))))))))) လျှော်စက်ဒေဝူးကုမ္ပဏီ 15let ကျော်ဘို့ကိုသစ္စာရှိရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်! အများကြီးထွက်ကိုလျှော်ဖို့အချိန် ...
တီဗီကို LG p42la662v ပိုကောင်း pothodit 3D ဘို့မဆိုစတီရီယို pair တစုံ? မေးခွန်း: တီဗီ LG က passive 3D အဘို့အဘယ်သို့ 3D ကဗီဒီယို? အဖြေ: stereopary1 ဆုံးဖြတ်ချက် 1920 × 1080 ထက်မပိုမြင့်မရွေးရပါမည် ....
ကောင်းသော -bass bass Audio-Technica ပါသောနားကြပ်များကိုကျွန်ုပ်အားပြောပါ။ ATH-CK303M ကောင်းသောနားများ။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင် vrales ဘလူးတုသ်နားကြပ်ကိုရရှိသည့် "နား" ကိုကြည့်ပါ။ 2.1 ယူလိုက်တယ်။ ငါစျေးပေါစျေးပေါမတှေ့ခဲ့ပေမယ့်အဲဒီမှာဘေ့ရုံကြောက်မက်ဘွယ်။ အတွက် ...
ငါအက်ဒီဆင်တီထွင်မီးခွက်အစားထိုးသည့် 60 နဲ့ LED မီးခွက်သည်မြှောက်ဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်ရသောအခါဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်6BT ဖို့ဒီဇိုင်းအာဏာအားလုံးကို LED ငါ့အိမျမှာ LED မီးခွက်, chandeliers ကိုဝယ်ခြင်းငှါအလိုရှိ၏။ သို့သျောလညျးရှိပါတယျ ...
သင်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်စုတ်တံအဘို့အစိုင်းစိုင်းအခမဲ့စုတ်တံကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ရှိရာ။ အခြေခံပညာစုတ်တံပု SAI သူ့ဟာသူ (ရာအရပျ-ဘယ်မှာ-ဖြစ်ပါတယ်-SAIEasy Tool ကို SAIelemap Paint) ရှိရာ folder ထဲမှာရှိပါတယ်။ .bmp ဖိုင်တွေကိုတစည်းရှိပါတယ်။ 1 ... ။
ဝယ်ဖို့အကောင်းဆုံးတီဗီ၏အဘယျအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သနည်း Philips ကအဓိကတီဗီ signal ကိုရန်မကွာခြားချက်ဒီလိုဒစ်ဂျစ်တယ်တီဗီရုပ်ပုံငါ3Analog စတီဗီ signal ကိုမတူဘဲသည်ကောင်းရှိတစ်ဦးရဲ့အရည်အသွေးခဲ့စေသည် ...
difavtomat ဆိုတာဘာလဲ? ၎င်းသည်တိုတောင်းသော circuit နှင့် RCD ကိုကာကွယ်ရန်အလိုအလျောက်စက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် overload နှင့် electric shock မှလိုင်းကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည်။ Difavtomat သည်အတိုကောက်ဖြစ်သည်။
အလူမီနီသို့မဟုတ်လှဲချသံမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း induction မီးဖိုများအတွက်သင့်လျော်သောပါသလဲ မူအရ, သွန်းသံကိုဖန်ဆင်းမဆိုတန်ဆာသော induction ယျာဉ်အဘို့ကြီးသောဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့တင်သွင်းချပစ်သံမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းဝယ်ယူအကြံပြုကချောချောမွေ့မွေ့ရှိပြီး ...
Husqvarna chainsaw သို့မဟုတ်တည်ငြိမ်သောအဘယ်အရာပိုကောင်း? ငါ့အဘို့အကောင်းဆုံး Husqvarna, ဒါပေမယ့် branded သည် (အဆီများ) ကိုဝယ်ခြင်းငှါအဆင်သင့်ရ။ အေးဆေးတည်ငြိမ်လွန်းသည်ကောင်းပေမယ့် Husqvarna ပိုကြီး kubatazh သစ်သားများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဤသည်ငါ့ကိုမေးခွန်းထုတ် ...
LG အဝတ်လျှော်စက်၏ display တွင် CL စာလုံးများကဘာကိုဆိုလိုသနည်း။ စက်သည်အေးခဲနေသည်။ ဒါအမှားမဟုတ်ပါဘူး CL - ကလေးများသော့ခတ်ခြင်း (ကလေးသော့ခတ်ခြင်း) နောက်ဆုံးတွင်လမ်းညွှန်ချက်များကိုကောက်ယူဖတ်ပါ။ အမှားအ ၀ တ်လျှော်စက်များ ...
ဘယ်မှာပန်းကန် Multivarki Panasonic က SR-TMH18 ကိုဝယ်ခြင်းငှါငါ့ကိုပြောပြပါ, မင်္ဂလာပါ, ဘယ်မှာခွက်ကိုရှာတွေ့မှသငျသညျနိုငျခဲ့ကွသနညျး ဒါ့အပြင်ကိုယ့်ကိုရှာနေပါတယ်, ငါသည် (အလားတူဒုက္ခတစ်ပန်းကန်အစက်အပြောက်အတွက်ချွတ် peeled ဖြစ်ပါတယ် (ဘယ်နေရာမှာမဆိုတခြားကိုမတှေ့နိုငျ ...
သူတို့က TV မှာရှိတဲ့ HERZ ဟာလိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်းနဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းလို့ဘာကြောင့်ပြောတာလဲ။ အထူးကု၏ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆန့်ကျင်မှုများမရှိပါ - 100 hertz နှင့်တီဗီများအကြားပုံရိပ်တွင်သိသာထင်ရှားသောကွာခြားချက်အမှန်ရှိသည်။
ခြားနားချက်အနိမျ့နှင်းခဲမျှ fost နှင့်ရေခဲသေတ္တာယို system ကိုအအေးခံခြင်းဆိုတာဘာလဲ? လက်လှမ်းဘာသာစကားဖြစ်နိုင်သလား? ရေခဲသေတ္တာ neobmerzayuschie နံရံအော်တို defrosting နှင့်အရည်အသွေးအအေးသေချာသည့်အဘယ်သူမျှမ Frost ကခေတ်သစ်နည်းပညာပစ္စည်းကိရိယာများ ...
LG ကရေခဲသေတ္တာ။ စာလုံးကိုပုံဖော်ခြင်း။ LG ကရေခဲသေတ္တာယနေ့လူကြိုက်အများဆုံးတွေထဲကရေခဲသေတ္တာ 399 စီးရီးဖြစ်ကြသည်။ ဒီစီးရီးရေခဲသေတ္တာအဖြစ်မျဉ်းထဲမှာရှိသမျှတို့, defrost ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကို marking ကြစို့ ...
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,510 စက္ကန့်ကျော် Generate ။